Iindaba-Lixesha lokuphinda undwendwele uMsebenzi woNxibelelwano wokuPakisha
Lixesha lokuphinda ujonge umsebenzi woNxibelelwano wokuPakisha
Nokuba licala lebrand okanye umthengi, bonke bayavumelana nesi sivakalisi:umsebenzi ophambili wokupakisha lunxibelelwano.
Nangona kunjalo, ugxininiso lwamaqela amabini lusenokungafani: ulwazi lwesiqhelo oluthi iibrendi zicudiswe kwiilebhile ngenxa yeemfuneko zolawulo lunokuba lurhwebo olubalulekileyo kwizigqibo zokuthenga abathengi.
Zeziphi iinkcukacha eziphembelela izigqibo zokuthenga zabathengi?
Izithako kunye neenyaniso zeSondlo
"Iya kujonga kwi-shelf life, izithako, itafile yamandla."
"Indawo yokuthengisa ebhaliweyo kwiphakheji iyasebenza kakhulu kum, njengokongeza ibhaktheriya ye-XX, ndiya kuyithenga; i-zero yeshukela kunye neekhalori zero, ndiya kuyithenga."
Kuphando, sifumene ukuba isizukulwana esitsha sabathengi abancinci sikhathazeke kakhulu malunga noluhlu lwezithako kunye noluhlu lwamandla.Babonakala benomdla ngakumbi ngokuthelekisa uluhlu lwezithako kunye neelebhile zesondlo kunokuthelekisa iithegi zexabiso.
Ngokuqhelekileyo igama eliphambili - "zero trans fatty acid", "zero sugar", "zero calories", "ukunciphisa ityuwa" kunokubenza bathathe ikhowudi ye-QR yokuhlawula.
Oko kukuthi, "amanqaku okuthengisa" anjalo kufuneka abekwe kwindawo ebonakalayo yephakheji ukutsala ingqalelo kunye nokukhuthaza ukuthenga.
"Imvelaphi ibalulekile, kwaye umthamo wobunzima kufuneka ucace."
"Inokuba andikhathali kangako ngendawo yemvelaphi ngaphambili, kodwa ngokuqinisekileyo ndiza kujonga iimveliso ezinomkhenkce emva kobhubhani."
"Ukuchongwa kwemvelaphi kubaluleke ngakumbi. Kungcono ukubona iinkomo zase-Australia okanye iinkomo zaseMelika ngokukhawuleza."
Ingaba ithunyelwa ngaphandle okanye yendawo, ukubaluleka kwemvelaphi kuxhomekeke ekubeni yinto ebalulekileyo yokuthengisa okanye cha.Okubangela umdla ngakumbi, kunokutshintsha ngenxa yokunyuka kweengqikelelo ezintsha, iindawo ezithandwa kakhulu kumazwe ngamazwe kunye notshintsho kwimeko yangoku.
Ngolwazi olunjalo, iindlela zonxibelelwano nazo zifuna ukusungula izinto ezintsha. Indlela kunye nexesha lokunxibelelana ngokufanelekileyo kusezandleni zophawu.
Umhla wemveliso kunye nomhla wokuphelelwa
"Andiyithandi ngokwenene ukuba umhla wokuphelelwa kwexesha kunye nelizwe lemvelaphi libhalwe kancinci kakhulu kwipakethe yemveliso."
"Ndiyathanda ukupakisha apho unokubona umhla wokuphelelwa kwexesha ngokujonga nje, ungayifihli kwaye uyifumane."
"Ukuba ulwazi oluthile lwemveliso lubhalwe kuphela kwibhokisi yangaphandle, emva kokuyibeka efrijini, i-shelf life kunye nolunye ulwazi olubalulekileyo aluyi kubonakala ixesha elide."
Icala le-brand lihlala lithatha isigqibo apho ezi ziqwenga zimbini zolwazi ziya "kubekwa" ngokusekelwe kwiimpawu zemveliso kunye nenkqubo yokuvelisa ukupakishwa, kunye nokusebenza kakuhle kwemveliso njengento ephambili.Kodwa ukubaluleka kolu lwazi kunokujongelwa phantsi.
Ukujonga umhla wemveliso kunye nomhla wokuphelelwa kwemveliso idla ngokuba linyathelo lokugqibela lokuthenga abathengi.Ukuvumela abathengi ukuba bagqibe ngokukhawuleza umsebenzi wokuhlola unokukhawuleza ukuququzelela ukuthengiselana.Eli shishini lisengqiqweni lihlala lixinga kweli xesha, kwaye baninzi abathengi abancama ukuthenga ngenxa yokuba ulwazi "lufihlwe" kwaye "alufumaneki", kwaye "banokucaphukela" uphawu kunye nemveliso.
Lixesha lokuphinda ujonge umsebenzi wonxibelelwano weukupakishwa
Xa icala le-brand lithatha indawo yezinto zokupakisha zeplastiki kunye nokupakishwa kwephepha, sisizathu esibalulekileyo sokuba "ukupakishwa kwephepha kulungele ukunxibelelana".Ukupakishwa kwamaphephainokunceda iibrendi ngokusebenzisa ubeko lonxibelelwano olukhulu kunye neenkqubo ezininzi zoshicilelo.UFang uya kunxibelelana ngcono kwaye aqaqambise ingqiqo yexabiso.
Ixesha lokuposa: Mar-25-2022